အာရှတစ်လွှားကလူကြိုက်များတဲ့ အစားအစာအစုံစုံကို စျေးချိုချိုနဲ့သုံးဆောင်နိုင်မယ့် Tasty Yangon – FoodiesNavi
အာရှတစ်လွှားကလူကြိုက်များတဲ့ အစားအစာအစုံစုံကို စျေးချိုချိုနဲ့သုံးဆောင်နိုင်မယ့် Tasty Yangon
By yin sandi On May 4, 2018 0
အစားအသောက်ကောင်းကောင်းလေးတွေများ ဈေးတန်တန်လေးနဲ့စားလိုက်ရရင် တွေ့ရာမြင်ရာဘဝတူအစားတစ်လိုင်းတွေကို သတင်းကောင်းလေးတွေပါးလိုက်ရမှ ? မဟုတ်ရင် မနေနိုင်မထိုင်ဖြစ်နေရော ? အခုလည်း အက်မင်သွားစားခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးကို ပြန်တွေးရင်း ကျေနပ်မိလွန်းလို့ တပြုံးပြုံးနဲ့ Review လေးရေးပေးလိုက်တာမို့ ? ပြုံးပြုံးလေးဖတ်ပေးကြပါကုန် ? ။ အက်မင်စားခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးကတော့ တာမွေမြို့နယ် တောင်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်းပေါ်က အလွယ်ပြောရရင်တော့ Eleven Media ရုံးဘေးနားလေးမှာပဲ ။ ဦးချစ်မောင်လမ်းလမ်းကနေ ဝင်သွားရင်နီးသလို တာမွေ ထ(၃)ကျောင်းဘေးကလမ်းကဝင်သွားရင်လည်း လမ်းမပေါ်တင်ပဲဆိုတော့ ရှာရတာတော်တော်လွယ်ပါတယ်။ ဆိုင်နာမည်လေးကတော့ ” Tasty Yangon ” ပါ။ အာရှတစ်လွှားကလူကြိုက်များတဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ အနောက်တိုင်းအစားအစာတွေကို တစ်ဆိုင်လေးမှာတင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ ရရှိနိုင်မယ့်ဆိုင်လေးပါ။ ဆိုင်လေးက သပ်သပ်ရပ်ရပ်အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ အဲကွန်းစိမ့်စိမ့်လေးဆိုတော့ အပြင်မှာဘယ်လောက်ပူပူ ငြိမ့်ပြီးဇိမ်နဲ့စားလို့ရတာပေါ့ ? နောက်ကျရင် Menu တွေမစုံဘူးကြားလို့ ရုံးချိန်ကြီးခပ်စောစောလေးသွားလိုက်တာ လူရှင်းနေရောပဲ ။ အက်မင်ကတော့ ဘေးဘီသိပ်ရှက်နေစရာမလိုတော့ဘူးဆိုပြီး အဝကြီးတွယ်ပစ်ခဲ့တယ်။ ? ?
ဆိုင်နေရာနဲ့ရနိုင်တာတာလေးတွေ အကျဉ်းချုံးညွှန်းပြီးပြီဆိုတော့ အက်မင်စားဖြစ်ခဲ့တဲ့ Menu လေးတွေအကြောင်းကို သွားရည်ယိုသွားအောင် ? ? ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ Tasty Yangon မှာအက်မင် သဘောအခွေ့ဆုံးကတော့ မာလာရှမ်းကောပါပဲ ? အမြဲဂျင်းတွေမိခဲ့ရလို့လားတော့မသိ အသားစုံနဲ့ရှယ်ကြီးတစ်ပွဲကိုမှ (၆၀၀၀)ကျပ်ဆိုတော့ မျက်လုံးတွေကိုပြူးသွားတာပဲ ? အမယ်ရောစုံရဲ့လားလို့ သံသယဝင်လိုက်သေးတယ် ? ဟင်းပွဲလာချပေးတော့မှ ကိုယ်တကယ်ယုံသွားတော့တယ်။ ကြက်သားတွေအများကြီးနဲ့ ပုဇွန်အကြီးကြီးနှစ်ကောင်တန်းမြင်ကတည်းက ဒဲ့ကြွေသွားတော့တာပဲ ။ ငါးဖက်ထုပ်တွေဘာတွေ မပါပေမယ့် ကြက်သားလုံး ၊ ကြက်သားဖတ် ၊ ပုဇွန် ၊ အသီးအရွက်အစုံနဲ့တင် တော်တော်ကြီးတန်တယ်လို့ မှတ်ချက်ချရသလို အရသာကလည်းအပိုအလိုမရှိပဲ။ အထုံအရသာအဖတ်လေးတွေကိုလည်း ဟင်းအနှစ်အနေနဲ့မထည့်ဘဲ အဖတ်လေးတွေနဲ့ထည့်ပေးထားကြောင့် အထုံအရသာမကြိုက်တဲ့သူတွေက ဖယ်စားလို့ရပါတယ်။ တစ်ခုပဲ ပုဇွန်ထုပ်ခွာစားဖို့ လက်အိတ်မလုပ်ပေးထားတော့ လက်ဗလာကြီးနဲ့ခွာစားရတာ သိပ်တော့အဆင်မပြေဘူးရယ် ?
ရေဘဝဲကင်ကလည်း အက်မင်လုံးဝအစွဲကြီးစွဲသွားတဲ့ အစားအစာလေးပါပဲ ? ရေဘဝဲအသားလေးက တင်းတင်းလေးဆိုတော့ လတ်ဆတ်မှန်းတကယ်သိသာတယ်။ ပင်လယ်စာအချဉ်လေးကလည်း ♨ သံပုရာနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ တို့စားရတာတထုတ်ထုတ်လေး ၊ ဝါးစားကြည့်ပြီးအရသာခံလိုက်တိုင်း ပင်လယ်လေတိုက်ခတ်ခံလိုက်ရသလို ? လန်းဆန်းပြီးခံတွင်းရှင်းသွားတာပဲ ။
အူချိုကင်ကတော့ လူကြိုက်များလွန်းလို့ စောစောသွားပြီးလက်ဦးမှုရယူထားမှ စိတ်ချရမယ့်ဟင်းပွဲလေးပါ ? သန့်ရှင်းပြီး ခြောက်ခြောက်လေးကင်ပေးထားတော့ အနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ ဆန်လှော်မှုန့်ထည့်ပြီးဖန်တီးထားတဲ့ အချဉ်ရည်ပျစ်ပျစ်လေးနဲ့တွဲစားကြည့်လိုက်တော့ အရသာကတော့ လုံးဝအမေးဇင်းပါပဲ ?
ကင်းမွန်သုပ်ကလည်း အက်မင်ကပဲ ပင်လယ်စာကြိုက်လွန်းလို့လားတော့မသိ လျှာကိုဂျွမ်းပြန်ထွက်နေတာပဲ ။ ချဉ်ငံစပ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘဲ အရသာအနေတော်လေးနဲ့ ကင်းမွန်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်အရသာလေးကို ရှယ်သုပ်ပေးထားတာက စေတနာပါမှန်းတော်တော်သိသာတယ်။
ပင်လယ်စာတုံယမ်းဟင်းရည်ကတော့ အကြည်နဲ့အနောက်ဆိုပြီးရှိပါတယ်တဲ့ ဘာကွာလည်းမေးကြည့်လိုက်တော့ အနောက်ကအကြည်ထက်ပိုစပ်တယ်ဆိုလို့ အနောက်ပဲမှာဖြစ်တယ်။ တုံယမ်းနံ့သင်းသင်းလေးဖန်တီးထားတာက ရှူးရှူးရှဲရှဲသံပုရာနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ ခေါင်းထဲတောင်ကြည်လင်သွားသလိုပဲ။ ဒီဆိုင်လေးရဲ့ထူးခြားချက်က အမွှေးအကြိုင်အနေနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာ ရှောက်ရွက်ကိုအဓိကထားပြီး သုံးပေးထားတော့ မြန်မာခံတွင်းနဲ့ ပိုပြီးပနံသင့်တာပါပဲ။
ဟင်းရည်လာချတော့ ပင်လယ်စာနည်းတယ်ထင်လိုက်တာ ? တကယ်ကျတော့ သူတို့လေးတွေကရေငုပ်နေကြတာ ? ဇွန်းနဲ့ခပ်ကြည့်လိုက်မှ ပုဇွန်ထုပ် ကင်းမွန်တွေအားကြီးပဲ စားရတာတကယ်ကြီးအားရလိုက်တာ မှိုလေးတွေလည်းအားကြီးပါတော့ ပိုလို့အရသာပေါ်ပြီး အရည်လေးက သောက်လို့ကောင်းမှကောင်း ? ပုဇွန်ကြီးတွေတော့ ပုံမှာသာကြည့်ပါတော့
တုံယမ်းပင်လယ်စာထမင်းကြော်ကတော့ တုံယမ်းအရသာအသည်းစွဲတွေအတွက် ? တကယ်ကြီး Heart ထိစေမယ့်စားပွဲလေးပါပဲ။ ပင်လယ်စာတွေတစ်ပုံတစ်ပင်ကြီးပါဝင်ပြီး တုံယမ်းအရသာလေးတွေက ထမင်းစိလေးတွေ အသားလေးတွေထဲထိတိုးဝင်နေတာမို့ စားကြည့်လိုက်တိုင်း လျှာပေါ်ကိုတုံယမ်းအရသာတွေ ? ယိုဖိတ်ကျလာစေမှာပါ။
ထိုင်းဝက်သားအစပ်ထောင်းကတော့ ခဲလေသမျှသဲရေကျပဲ ? ကိုယ်ထင်ထားတာက အသားတွေထောင်းထားမယ်ထင်နေတာ လာချတော့မှ ဝက်နံရိုးနုတွေကို အဓိကထည့်ထောင်းထားတော့ စားရတာသိပ်မတန်ဘူးလို့ထင်မိတယ်။ Menu ထဲကလောက်လည်း မများဘူးရယ်။ အရသာကတော့ ကောင်းပေမယ့် အသားကလည်းနည်းနည်းမာတော့ အက်မင့်အနေနဲ့တော့ သိပ်မကြိုက်လှဘူးရယ် ?
စတော်ဘယ်ရီဆော်ဒါနဲ့ ဖရဲသီးဖျော်ရည်လေးကတော့ အအီအဆိမ့်ဖြေဖို့အတွက် လုံးဝကွက်တိပဲ ? ။ အက်မင်ကတော့ စတော်ဘယ်ရီဆော်ဒါလေးကို ပိုကြွေမိတယ်။ အရသာစူးစူးလေးက ရင်ချောင်သွားတော့ စားလို့ပိုဝင်တယ်ရယ် ? ဖရဲဖျော်ရည်လေးကတော့ ပျစ်ပျစ်လေးနဲ့သောက်ရတာ တော်တော်လေးရင်အေးစေတယ်။
ရေခဲပုံ(အချိုရည်နှစ်မျိုး)ကတော့ ပုံစံလေးလှလို့စမ်းမှာကြည့်တာ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ယှဉ်ကြည့်ရင် သိပ်မတန်လှဘူး ။ ရေခဲခြစ်ကို ဘာလီနဲ့ဇီးဖျော်ရည်ရောဖြန်းပြီး အုန်းသီးဂျယ်လီလေးတွေထည့်ထားတာဆိုတော့ ရေခဲခြစ်အရသာကြီးလောက်ပါပဲ ။ အက်မင့်အကြိုက်နဲ့တော့ သိပ်မကိုက်လှဘူး။
အက်မင်သာ နောက်တခေါက်သွားစားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ မာလာရှမ်းကော ၊ ရေဘဝဲကင် ၊ အူချိုကင် ၊ ပင်လယ်စာတုံယမ်းဟင်းရည်နဲ့ စတော်ဘယ်ရီဆော်ဒါလေးတွေကို ပြန်စားဖြစ်ဦးမှာအသေအချာပါပဲ။ အစားတစ်လိုင်းတို့လည်း အက်မင်အကြိုက်လေးတွေကို စမ်းစားကြည့်ပြီး အမြင်ချင်းဖလှယ်လို့ရပါတယ်နော် ? ကားသိပ်မကြပ်တဲ့လမ်းထဲမှာဆိုတော့ ကားပါကင်သီးသန့်ကြီးလုပ်မထားပေမယ့် ကားရပ်လို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။
ဈေးနှုန်းတွေကလည်း ပုံမှန်နှုန်းထားလေးတွေနဲ့ အစားအစာစုံစုံလင်လင်လေးရနိုင်တော့ တကယ်ကြီးကြွေမိပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအသေးစိတ်လေးတွေသိချင်ရင်တော့ ဘောင်ချာစာရွက်လေးမှာသာ ကြည့်လိုက်ပါတော့နော်။ ?
လျှာပေါ်ဝဲပျံနေတဲ့အရသာတွေပေးစွမ်းနိုင်သော Imperial Garden ? ? ? ……….
ထမင်းနဲ့တွဲစားစား အချဉ်ရည်လေးနဲ့တို့စားစား ရှယ်ကောင်းတဲ့ အိအိဆိမ့်ဆိမ့် မန္တလေးပဲကြော်